विश्व पर्यावरण दिवस २०७५ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / विश्व पर्यावरण दिवस २०७५
विश्व पर्यावरण दिवस २०७५
Posted by: युगबोध in विचार June 11, 2018	0 134 Views
पर्यावरण भने को जो हामी हो इनौ ं तर हाम्रो ना¨ो शरीरसग अन्तरसम्बन्धित भइ निरन्तर अन्तक्र्रिया गनेर् यस ब्रह्माण्डका यावत वस् तुहरुको समष्टि रुप हो  । छो टखरीमा यसलाई बाहिरी आवरण पनि भन्ने गरिन्छ । वास् तवमा भन्ने हो भने जीव उत्पतिको मूल आधार मानिएको पञ्चभूत तत्व अर्थात हावा, पानी, घाम, माटो र शून्य (आकाश) हो  । यसलाई नै पर्यावरण भनिन्छ । तर आज हामी मानिसकै अचे तना भनौ ं या लापरवाहीका कारण पञ्चभूत तत्वहरु नै प्रदूषित ह“ुदै गइरहे का छन् भने यसमा आधारित अन्य जीव (वनस् पति र वन्यजन्तु) विनाश हुदै गइरहे का कारण आज मानिस जटिल पर्यावरणीय समस् याबाट गुज्रिरहे को छ । जसको कारण मानिसको वर्तमान कष्टप्रद बन्दै गइरहे को छ भने भविष्य अन्धकार बन्दै गइरहे को छ । जब मान्छे पर्यावरण प्रदूषणको जटिल समस् यामा पर्न थाल्यो अनि मात्र संसारका सचे त मानिसहरु जुर्मुराउन थाले  । यति मात्र हो इन संसारभरका वै ज्ञानिकहरुले चे तावनीपूर्ण वक्तव्यहरु अलग–अलग र सामूहिक रुपमा दिन थाले पछि पर्यावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मे लन र गो ष्ठीहरु शुरु हुन थाले  । कतिपय विषयहरुमा महासन्धिहरु भए । धे रै राष्ट्रहरुले हस् ताक्षर गरे र प्रकृतिप्रति बफादार बन्ने प्रयास गरे भने कतिपयले हस् ताक्षर गर्नबाट आफूलाई अलग राखे र आफूलाई प्रकृतिप्रति अनुदार भएको सन्दे श दिए । अब सुस् त–सुस् त उनीहरु पनि सहभागी हु“दै गइरहे का छन् । पर्यावरणीय समस्या न कुनै एक जातको हो न त एक वर्गको नै  । यस्तै गरी न कुनै लि¨को हो न त कुनै र¨ को  । यति मात्र हो इन यो समस् या न कुनै एक धर्मको हो , न त एक राष्ट्रको नै  ।
यो त समस् त मानिसको साझा समस् या हो र समाधान पनि साझारुपमै खो जिनुपर्दछ । यसै मुताविक समाधानमा जुट्नुपर्दछ । यसको पुष्टि गदैर् ै १३ नो भे म्बर सन् २०१७ मा mयतजभच दबचम यल ष्लिभ मा प्रकाशित ले खमा भनिएको छ– एक सय ८४ भन्दा धे रै मुलुकका १५ हजार भन्दा बढी वै ज्ञानिकले मानव जातिलाई चे तावनी दिदै भने का छन्– वर्तमान तथा भावी मानव स्वास्थ तथा मानव महत्वका क्षे त्रहरु गम्भीर जो खिममा परे का छन् । यसको कारण अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, ताजा स् वच्छ पानीको पहु“चमा अभाव, वनस् पतिहरुको प्रजातिको लो प र मानव जनसंख्याको बृद्धि आदि हुन् । प्रसिद्ध वै ज्ञानिक जे न गुडाल, इ.ओ . विल्सन र जिम्स ह्यो निसनले संयुक्तरुपमा चे तावनी पत्रमा हस् ताक्षर गरी वै ज्ञानिक पत्रिका द्यष्य(क्अष्भलअभ व्गयचलब िमा प्रकाशित गरे का छन् । यस् तै गरी विश्व वै ज्ञानिकहरुले मानिसलाई दिएको चे तावनी भन्ने ले खमा विभिन्न क्षे त्रका वै ज्ञानिकहरुले हस् ताक्षर गरे का छन् । यो हालसम्मको सबै भन्दा ठूलो उपलव्धि र समर्थन हो  । अधिकांश जीवित नो वे ल पुरस् कार विजे ता वै ज्ञानिक सम्मिलित १७ हजार वै ज्ञानिकद्वारा हस् ताक्षरित डकुमे न्टमा चे तावनी दिइएको छ । पर्यावरणप्रति मानव हस् तक्षे पले मानवद्वारा परिकल्पना गरिएको सुन्दर भविष्य माथि ठूलो आघात पु¥याएको छ । वै ज्ञानिक जे न गुडालले उपरो क्त डकुमे न्टलाई अध्यावधिक गरे को बारे यसो भन्छन्– ‘हामीले अध्यावधिक ग¥यौ ं । किनकि आम जनतालाई जानकारी दिन चाहन्छौ ं । के ही अपवादलाई छो डे र विगत २५ वर्षयता पर्यावरणका विविध पक्ष अझ खराब बन्दै गएका छन् । सन् १९९२ दे खि कार्वनडाइअक्साइड ६२ प्रतिशतले बढे को छ । विश्व तापमान २.९ प्रतिशतले बढे को छ । यही तापक्रमलाई सहन नसकी मे रुदण्डीय प्राणीहरुको उपलव्धता २९ प्रतिशतले घटे को छ । यस् तै गरी २५ वर्षयता शुद्ध पानीको उपलव्धतामा २६ प्रतिशतले कमी आएको छ । तीन सय एकड वन विनाश भएको छ । उपरो क्त तथ्यहरुले भयावह अवस् थाको चित्रण गरे का छन् । यसबाट बच्न सबै लागि पर्नुपर्दछ ।
जलवायु र मौ सम
सरसर्ती हे र्दा जलवायु र मौ सम एकै हुन् कि जस् तो लाग्न सक्छ । तर हो इन, धे रै फरक छ । मौ सम भने को छिनछिनमा हुने परिवर्तन हो  । जस् तै दिनमा घाम लाग्ने , बादलले ढाक्ने , पानी पनेर् र हावाहुरी आउने हुन सक्छ । तर जलवायु परिवर्तन भने को लामो अन्तरालपछि दे खिने प्रक्रिया हो  । यसको असर हे र्नलाई कम्तिमा पनि एक दशक कुर्नुपर्दछ । अहिले आमरुपमा जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्द खुबै चले को छ । तर मे रो मान्यता अलि भिन्न छ । अहिले को जटिल पर्यावरणीय समस् या अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनको कारणले हो भन्ने छ । किनभने पृथ्वीको उत्पत्तिदे खि नै प्राकृतिकरुपमा जलवायु परिवर्तन हु“दै आएको छ । सृष्टिचक्रको विकासका निम्ति यो अनिवार्य शर्त पनि हो  । जलवायु परिवर्तनकै कारण पृथ्वी सृष्टिको लागि यो ग्य बन्न सहयो ग पुगे को हो  । मानिस आजको चे तनशील अवस् थामा आइपुग्न पनि यसको ठूलो यो गदान छ । प्राकृतिकरुपमा हु“दै आएको जलवायु परिवर्तनलाई थे ग्न नसके र डाइनासो र जस् ता भीमकाय जनावर यस धर्तीबाट लो प भएर गएको भनिन्छ । समस् या तब आयो जब १८ औ ं शताव्दीमा मानिसका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न भने र औ द्यो गिक क्रान्ति शुरु भयो  । अकोर् तिर जनसंख्या बृद्धि तीव्ररुपमा हुन थाल्यो  । जसको कारण व्यापकरुपमा वन विनाश हुन पुग्यो  । अनि मात्र अप्राकृतिकरुपमा तीब्र रुपले जलवायु परिवर्तन हुन थाले पछि नै भयावह समस् याहरु दे खिन थाले का हुन् । एकातिर प्रदूषण फै लाउने उद्यो ग, अव्यवस् िथत फो हो र मै ला । अकोर् तिर वन विनासले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्या“सको जालो बाक्लो रुपमा लाग्न पुग्यो  । सूर्यबाट आउने किरणहरु पृथ्वीमा टकराएपछि माटो , पानी वनस् पति र प्राणीहरुले लिन्छन् र बा“की फकेर् र अन्तरीक्षमा जा“दासम्म समस् या थिएन । अन्तरीक्षमा जाने किरणहरुलाई हरितगृह ग्या“सले पुनः पृथ्वीमा फर्काउ“दा नै पृथ्वीको वायुमण्डल र पृथ्वीको तापक्रम तीब्ररुपमा बढ्न थाले पछि नै वर्षा र हिमपातमा अनियमिता, समुन्द्री तुफान आदि क्षे त्रहरुमा कुप्रभाव पनेर् क्रम बढ्न थाले पछि नै मानिसको दै निकी कष्टप्रद बन्दै भविष्य अन्धकारतिर अगाडि बढे को हो  । त्यसै ले त अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तन भन्नु परिरहे को छ । हरितगृह ग्या“स भने को कार्वनडाइअक्साइड, मिथे न, नाइट्रक्स अक्साइड, हाइड्रो फ्लो रो कार्बन, क्लो रो फो रा कार्बन र हे ग्जा कार्बन हुन् । यसमा ६२ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइडको भूमिका छ । अरुको भूमिका कम छ । तर पनि खतरनाक छन् । त्यसै ले कार्बन उत्सर्गलाई तत्काल ५० प्रतिशतमा झानेर् तिर लाग्न अब मानिसले ढिलाइ गर्नुहु“दै न । यसलाई सुस् त–सुस् त न्यून अवस् थामा पु¥याउनुमा नै मानिसको वर्तमान र भविष्य अडे को छ । अन्यथा प्राणीमा सर्वश्रे ष्ठ सचे त मानिसकै कारण यो सुन्दर धर्ती मानिसको निम्ति अयो ग्य बन्ने निश्चित छ ।
ओ जो न
यो पृथ्वीको रक्षाकवच हो  । यसै को कारणले पृथ्वी सुन्दर र सृष्टिको निम्ति यो ग्य भएको हो  । यो ग्या“स पृथ्वीको सतहदे खि १५ कि.मी. माथि २४ कि.मी. बाक्लो छ । यसले सूर्यबाट आउने परावै जनीजस् ता घातक किरणलाई रो के र पृथ्वीको सृष्टिलाई बचाएको छ । सूर्यबाट आउने किरणहरुले के ही अक्सिजन अणुलाई तो डे र अक्सिजन परमाणुमा बदलिदिन्छ । स् वतन्त्र अक्सिजन परमाणु संख्या ३ मिले र १ अणुमा बदलिन्छ जसलाई ओ जो न ग्या“स भनिन्छ । यो अत्यधिक क्रियाशील भएको ले वायुमण्डलमा रहे को नाइट्रक्स अक्साइडस“ग क्रिया गदैर् अक्सिजन बनाइदिन्छ । यसरी ओ जो नको मो टो तहमा प्राकृतिकरुपमा निरन्तर ओ जो न बन्छ र नष्ट हुन्छ । यसको अनुपात मिल्दासम्म निरन्तर सन्तुलन बनिरहन्छ । यसको सन्तुलन जब बिग्रन थाल्यो तब मानिसले विभिन्न माध्यमबाट क्लो रिन परमाणु फाल्न थाल्यो  । यसले ओ जो न अणुस“ग क्रिया गर्छ र ओ जो न अक्सिजनलाई क्लो रिन मनो अक्साइडमा बदलिदिन्छ । अनि ओ जो नमा कमी आउ“छ र त्यसको पूर्ति हुन नसक्नु ओ जो न तह नष्ट हुनु हो  । भनिन्छ अहिले अफ्रिका महादेश जति ठूलो र हिमाल जति अग्लो प्वाल परिसके को छ । जसले गर्दा छाला क्यान्सरमा बृद्धि गराइरहे को छ भनिन्छ ।
प्रत्ये क वर्ष संसारभरि जुन ५ विश्व पर्यावरण दिवस मनाइ“दै आइरहे को छ । ने पालमा पनि मनाउदै आइरहे का छौ ं । प्रत्ये क वर्ष एउटा नारा अगाडि सारिन्छ । यो सालको नारा थियो ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौ ं पुनः प्रयो ग गर्न नसकिने बहिष्कार गरौ ं ।’ प्लाष्टिक अजै विक वस् तु हो  । त्यसै ले कै यौ ं वर्षसम्म नगले र जमिनमा रहनसक्छ । यत्रतत्र फालिदा घर पालुवा पशुहरुले खाएर मर्न सक्छन् । माटो मुनि बस् दा त्यो माथिको विरुवा हुर्कन सक्दै न । ढलहरु बन्द भएर समस्या उत्पन्न हुन्छ । माटो मा रासायनिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । पानीमा फाल्दा मुहानहरु बुजिन सक्छन् । जलचरहरुलाई प्रभाव पार्न सक्छ । जता फाले पनि समस्या उत्पन्न गराउछ । अझ खतरनाक अवस् था त जलाउ“दा उत्पन्न गराउ“छ । यो जलाउ“दा कार्बनडाइअक्साइड निस् िकन्छ भने झन खतरनाक त कार्बनमो नो अक्साइड निस् कन्छ । यो ग्या“स वायुमण्डलमा जादा एसिड वर्षा गराउँछ । त्यसै ले प्लाष्टिक फाल्दा पनि खराव, जलाउ“दा झन खराब हुने भएको ले यसको उत्पादन नै बन्द गराउ“दा अति उत्तम हुन्छ । यसरी वषेर् नि जनचे तना फै लाउने कुनै न कुनै विषयलाई समे टे र एउटा नारा तय गरी संसारभरि पर्यावरणीय दिवस मनाइन्छ । मनाएर मात्र हु“दै न प्रत्ये क दे शका शासक र सचे त नागरिक कार्यान्वयन गर्न लागि पर्नुपर्दछ अनि मात्र पर्यावरण दिवस मनाएको सार्थकता हुने छ । अब प्रकृतिमै त्री जीवनशै ली बनाउन ढिलाइ गर्नुहु“दै न । यही नै सन्दे श हो , विश्व पर्यावरण दिवसको  ।
Previous: निरर्थक पाइलाहरुको जोडघटाउ
Next: साहित्यको विकासमा योजना बनाऊ